मोबाइल हरायो ? चिन्ता नगर्नुस् – Nepal Journal
Posted By: Nepal Journal August 7, 2018 | २२ श्रावण २०७५, मंगलवार १५:०२
काठमाडौँ, साउन २२ । तपाईंको मोबाइल फोन सेट हरायो ? फुट्यो या बिग्रियो ? अब धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन । किनभने हरायो भने किनिदिने र टुटफुट भएमा बनाइदिने कम्पनी नेपालमै खुलेको छ ।
मेरो सुरक्षा नामको सफ्टवेयर कम्पनीले काठमाडौँमा गत हप्तादेखि यो सेवा शुरु गरेको छ । उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेम सुनुवार भन्छन् – “हामीले यो सेवा शुरु गरेको हप्तादिनमै हाम्रो एप्स आठ हजारले ‘डाउनलोड’ गरिसकेका छन् । यस कम्पनीसँग हाल अन्य कर्मचारीका अतिरिक्त १० जना कम्प्युटर इञ्जिनियर र सूचना प्रविधिका विज्ञहरु छन् ।
यस सेवाका लागि एनरोइड मोबाइलका लागि गुगलको ‘प्ले स्टोर’ मा र आइफोनका लागि ‘एप्स स्टोर’ मा गएर मेरो सुरक्षा डाउनलोड गर्न सकिन्छ । उक्त कम्पनीको एप्स् डाउनलोड गरेपछि प्रत्येक सेटका लागि त्यसको लागत मूल्यको पाँच प्रतिशत रकम अनलाइनबाटै तिरेपछि मेरो सुरक्षाको सञ्जालमा दर्ता हुनेछ ।
यसरी डाउनलोड गरेपछि आफ्नो मोबाइलमा रहेका कुन कुन डाटाहरु सुरक्षित राख्ने भन्ने जानकारी उक्त एप्समार्फत नै मोबाइल प्रयोगकर्ताले कम्पनीलाई दिनुपर्छ । उक्त सफ्टवेयरको एप्समा रहेको कुनै एउटा बटम थिचेपछि आफ्नो मोबाइलको डाटा सो स्टोरमा जम्मा हुँदै जानेछ । त्यसपछि त मोबाइल सेट हराए वा नष्ट भए पनि त्यसमा रहेका फोन नम्बर र डाटाहरु उक्त स्टोरमा सुरक्षित रहने छन् ।
व्यक्तिको मोबाइलका डाटाहरु भण्डारण गर्ने काम गोपनीयताभित्र पर्दैन भन्ने प्रश्नमा उक्त कम्पनीका निर्देशक विश्वास अधिकारी भन्छन्, “त्यस्तो हुँदैन, हाम्रो एप्समा कसैको कुराकानी भण्डारण हुँदैन र मोबाइल प्रयोगकर्ताले जुनजुन डाटाहरु सुरक्षित राखिदिनु भनेका हुन्छन् त्यो मात्र राख्ने हो ।”
Be the first to comment on "मोबाइल हरायो ? चिन्ता नगर्नुस्"